मौरीबाट उपचार गर्ने (एपि) थेरापी केन्द्र स्थापना गरिँदै
१. दाङमा तीन सय शैय्याको सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण हुने
२. ह्वीप र सांसद पदमा पार्टी केन्द्रीय कमिटी निर्णायक : नेता पाण्डे
३. तानाशाहको कद घटे पछि कागजको प्रतिमा बन्छन्, ओली बुख्याँचा बने : झाँक्री
४. हाम्रा नेताको चेतना खुल्ने कहिले ?
५. ट्र्याक्टर चालकको मृत्युका कारण दुम्किवासमा तनाव, राजमार्ग अवरुद्ध
६. उखुको मूल्य बढाउन किसानको माग
७. स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरेर छठ पर्व मनाउन आग्रह
८. पत्रकार महासङ्घ बागलुङका अध्यक्ष शिरीष सम्मानित
गृहपृष्ठ कृषि मौरीबाट उपचार गर्ने (एपि) थेरापी केन्द्र स्थापना गरिँदै
केन्द्र सञ्चालन अघि उपचार पद्धति सिकाउने र यसबाट हुने फाइदाको विषयमा जनचेतना जगाउने काम गरिने
चितवन । पूर्वी चितवनको भण्डारामा मौरीबाट गरिने उपचार (एपि) थेरापी केन्द्र स्थापनाको काम शुरुआत गरिएको छ । मौरीपालन विकास कार्यक्रमअन्तर्गत राप्ती नगरपालिका–६ मा केन्द्र स्थापनाको काम शुरु गरिएको हो ।
प्रदेश सरकारको रु पाँच लाखको लगानीमा पुरानो भवनलाई मर्मत थालिएको सो केन्द्रमा विभिन्न रोगको उपचार मौरी र मौरीजन्य उत्पादनबाट गरिने छ । अहिले भौतिक संरचना मर्मतको काम भइरहेको कार्यालयका प्रमुख डा. शिव रिजालले जानकारी दिए । उनले भने, “अहिले भौतिक संरचना निर्माणको काम भइरहेको छ ।” केन्द्र सञ्चालन अघि उपचार पद्धति सिकाउने र यसबाट हुने फाइदाको विषयमा जनचेतना जगाउने काम गरिने छ ।
यो पनि पढ्नुहोस.. गराँस फूल टिप्नेलाई पाँच हजार जरिवाना
सो भवनका लागि आवश्यक उपकरणको व्यवस्थासँगै जनतामा सचेतना जगाउने काम भइरहेको छ । यस केन्द्रमा मह, कुट, कुटको चोप, विभेनम (मौरी विष) लगायतको प्रयोग गरी उपचार गरिने छ । रिजालका अनुसार मौरी र मौरीजन्य उत्पादनबाट छाला, नसा, हाडजोर्ने, मानसिक रोगलगायतको उपचार गर्न सकिन्छ । रुघाखोकी र नसाको रोगका लागि खोटोबाट गर्न सकिन्छ भने मौरीको घारबाट नेभुलाइजर जडान गरी छाति र फोक्सोको उपचार गर्न सकिने उनले बताए ।
उनले भने, “मौरीको घारमा आएको आवाज र त्यहाँ उत्पन्न रसायनको कारण शारीरिक स्वस्थतालाई मद्दत पुग्ने गर्छ ।” नेपालमा मौरी र मौरीको उत्पादनबाट उपचार गर्ने केन्द्र काठमाडौँमा रहेको भन्दै उनले यसको विस्तार गर्नसकेमा मौरी पर्यटन विकास गर्न सकिने जानकारी दिए । मौरीलाई टोकाएर र मौरीको घारमाथि विस्तार बनाएर सुत्दा मानसिक रोगको उपचार गर्न सकिने बताइएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस.. ‘केपी प्रवृतिका विरुद्ध सम्झौता गर्दा सम्पुर्ण चिज ध्वस्त हुने देखे पछि त्यो प्रवृत्तिमाथि प्रहार गरें’ प्रचण्ड
प्रदेश सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सौराहामा एपि थेरापी केन्द्र स्थापना गर्ने भनेको भए पनि सो स्थानमा व्यवस्थापनमा कठिन परेपछि भण्डारामा स्थापना गरिएको हो । मौरीपालक कृषकलाई मह उत्पादन मात्र नभएर मौरीको विभिन्न परिकार उत्पादनका लागि मद्दत पुग्ने उद्देश्यले यो केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको हो ।
मौरीबाट उत्पादन हुने शाही खुराक, पोलन, कुट, मौरी विषलगायतका अन्य उत्पादनबाट विभिन्न रोगको उपचार हुने भएकाले यी वस्तु उत्पादनमा जोड दिन केन्द्र सञ्चालन गर्न लागिएको उनले बताएका छन् । रासस
तोरी उत्पादनमा बृद्धि
कौसीखेतीतर्फ आकर्षित गृहिणी
प्रहरीद्वारा अफिम खेती नष्ट
चैते धान खेतीतर्फ कृषकको आकर्षण बढ्यो
गहुँको नयाँ समर्थन मूल्य ३ हजार १११
राष्ट्र बैंकले आज ५ अर्ब २० करोडको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्दै
एकैदिन ६७ जना अन्नपूर्ण हिमालको चुचुरोमा
आगलागीबाट घर नष्ट भई टहरोमा बसेका भुजेल भन्छन्,घरलाई पुःन निर्माण गर्न पाए हुन्थ्यो
४६ दलले बुझाएनन् लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण
मास्क नलगाई हिड्नु भएको छ? गाडी चढ्न नपाइएला
: दिलीप कुमार मगर
: काशिराम बस्याल
: प्रेम पुन्थोकी